Xiamen AIR-ERV Tekinoroji Co., Ltd. iri nyanzvi mukutsvagisa & Kuvandudza uye kugadzira mweya kumhepo kupisa kudzoreredza masisitimu kubvira 1996 neako kuvaka.Tine zvigadzirwa zvemberi uye tinoteedzera iyo ISO 9001: 2015 uye Rohs kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, tora ISO9001: 2008 Quality System Certification uye CE certification nezvimwe. kukudzwa kupa OEM kana ODM masevhisi emakambani mazhinji anozivikanwa, akadai seGE, Daikin, Huawei nezvimwe, uye uwane mukurumbira wakanaka kumba nekune dzimwe nyika nemhando yepamusoro uye nemutengo unonzwisisika. nyowani / yakachena / yakasununguka mweya uye yekuchengetedza kupisa / simba. Yakabatwa neCOVID-19, kuchenesa simba rekudzoreredza mweya neiyo UV sterilization inowedzera uye inonyanya kufarirwa uye yakakosha mune yakasvibirira kuvaka.Mhepo yedu kumhepo ndiro yekupisa exchanger cores anoshandiswa zvakanyanya muHAVC, telecommunication, simba remagetsi, machira, mota, chikafu, zvekurapa , zvekurima, zvekuchengeta zvipfuyo, kuomesa, kuwotera, boiler uye mamwe maindasitiri emhepo kufefetedza, kupora kwesimba, kutonhora, kudziyisa, dehumidification uye kupisa kupisa kupora.Kana iwe uine chero mibvunzo kana zvaunoda, gamuchira kuti utaure nesu, ndatenda.
ERV Kupisa Kudzoresa Vent ...
ERV Kuchenesa Kudzorera Ventilator neKuchenesa ERV Kuchenesa Kudzora Ventilator neKunatsa kwete chete yakavakirwa-mukati inoshanda kwazvo inopisa exchanger yekudzosa kupisa uye kuchengetedza simba, asi zvakare wedzera yekutanga firita, inoshanda kabhoni firita uye HEPA firita kunyatso kusefa guruva, mabhakitiriya uye zvimwe zvinokuvadza zvinhu. mumhepo, PM2.5 kunatsa kunyatsoshanda kuri kusvika 99.5%. Inoshandiswa kune villa, chikoro, cafe kamuri, imba yekusangana, hofisi, hotera, rabhoritari, KTV, kirabhu yekusimbisa muviri, cinema, yepasi, imba yekuputa uye zvimwe ...
Kupisa Kwakachena uye Ener ...
Kupisa Kwakachena uye Kudzoreredza Simba Ventilator Simba rekudzorera mhepo mweya ndiwo epakati mweya mweya maitiro anopa mweya mutsva, bvisa mukati memhepo yakadzika uye nekudzikamisa hunyoro mukati mechivako. Kunze kwezvo, ivo vanogona kushandisa kupisa kwakadzoserwa kubva kune yakasviba mweya kupisa iyo iri kuuya yakachena mweya kune yakasununguka tembiricha. Izvi hazvibatsire chete kugadzira yakachena uye yakagadzikana nharaunda inosimudzira hupenyu hwevashandisi vekuvaka, asi zvakare kuwana simba rekuchengetedza simba. Inesarudzo: 1.Sensible aluminium ...
Yakapetwa Nzira Ventilator ...
Double Way Ventilator - yekupa uye yekudzimisa mweya panguva imwe chete Iyo mbiri nzira yekufema mweya inoshandiswa kupa mweya uye kupedza mweya panguva imwe chete, inogona kuburitsa mukati memukati yakasviba mweya kana kunze mweya nyowani mukati yekuvandudza mweya wefambiro. Brand AC mota ine yakaderera simba uye yakaderera ruzha. Standard knob switch kana akangwara controller yesarudzo. Feature: 1. Wide application: iyo yekuyerera renji iri 150 ~ 5,000 m³ / h, inokodzera chikoro, pekugara, imba yemusangano, hofisi, hotera, rabhoritari, fi ...
Imwe Nzira Ventilator ...
Imwe Nzira Ventilator - ipa mweya kana mweya wekufema Iyo imwe nzira yekufema mweya inoshandiswa kune yekupa mhepo kana mweya mweya sisitimu. Inesarudzo: 1.Brand DC mota kana AC mota yesarudzo. 2.Tatu dura mafirita esarudzo. Iko kune yekutanga firita + inoshanda kabhoni firita + HEPA firita yekudzivirira mweya wakasviba, HEPA firita inogona kunyatso kudzora PM2.5 uye kuona kuti mhepo yakachena uye yakachena. 3.Standard pfundo chinja kana akangwara controller for kuita. Feature: 1. Wide application: iyo yekuyerera renji iri 50 ~ 5,000 ...
Era Muchinjikwa Kuyerera Heat Ex ...
Era Cross Kuyerera Heat Exchanger Core Cross kuyerera ...
ERB Counter Inoyerera Heat ...
ERB Counter Kuyerera Heat Exchanger Core Counter f ...
ERC Enthalpy Kupisa Exch ...
ERC Enthalpy Heat Exchanger Core Iyo ERC kupisa ...
ERD Muchinjikwa & Counter ...
ERD Cross & Counter Kuyerera Heat exchanger Core ...
Zvakanakira uye Zvimiro zvebepa enthalpy kupisa chinja kubva kuXiamen AIR-E
1). Yakagadzirwa yakakosha fibrous pepa ine yakakwira mwando kukwana, yakanaka mweya kuomarara, anti-rends, kuchembera kuramba, anti-chakuvhe etc. 2). Chimiro chiri ABS, inotaridzika zvakanaka, isiri nyore kuputsa, nguva refu yebasa, pro-nharaunda, yakanaka mhepo kuomesa, simbisa kusimba uye tightn ...
1). Kudzivirirwa kwezvakatipoteredza - zvese zvinhu zvinoenderana neROHS / REACH zvinodiwa uye nematanho emunyika, iwo anowirirana-nharaunda. 2). Dhizaini yehunyanzvi - ive neyako dhizaini software yekugutsa akasiyana mamiriro ekushanda, kuburitsa mushumo neyakagadziriswa uye nekupa iyo ...